Global Haanta Weelka 2017 - Shiinaha Yangzhong nasiib Star Daboolayo
OEM sida khaaska ah
PTFE dahaarka Shaabadihii Rubber
Taangiga Weelka dayactir
Global Haanta Weelka 2017
The raxan weel taangiga caalamka ka kooban kala duwan oo ka mid ah noocyada taangiga ay ku jiraan taangiyada dareere, gaasas la galeen, budo, taangiyada isku bedelasho ah oo gaar ah. Haamaha hoos 20ft dhererka sida kuwa caadiga ah ee warshadaha ee saliidda la olloga ah kuma jiraan in Survey this. weelka taangiga ayaa ah mid si nidaamsan oo loo baahan yahay in ay la kulmaan heerarka adag hawlgalka, oo ay ku jiraan kormeerka wareegsan statutory iyo cusboonaysiinta shahaadada imtixaanka. Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan wax diiwaanka caalamiga ah ee weelasha taangiga. Data waa in la soo ururiyey by nidaamsan codsanaya milkiilayaasha taangiga iyo ka shaqeeya si ay u bixiyaan tiro raxan shirkadda iyo saarayaasha in ay soo sheegaan wax soo saarka cusub. Halkee xogta adag lama siiyo, Survey this bixiyaa qiyaas ku salaysan cilmi-internet oo la tashanaya wakiilada khibrad warshadaha. warbixin qoran yihiin sida heshay ama, in ay dhacdo gooldhalinta warbixinta gudahood, natiijada xisaabinta boqolkiiba xogta. Looguma tala gelin inay soo jeedinaya in tirooyinka loo xisaabiyaa waa sax in tiro sax ah. Readers waa in duubaan kor, ama hoos, sida looga baahan yahay.
liiska raxan ijaaray kuma jiraan in tirada guud ee raxan warshadaha, marka laga reebo kaydka lagu qiyaasay yar in ay yihiin oo aan waxtar lahayn. dheelitirka ee taangiyada "heshiiska" waxaa caadi ahaan lagu qiyaasey in ay niman beerrey ah u shaqeeya (65%) iyo wax rarta, iyo kuwa kale ee isticmaala taangiga (35%). Boqolkiiba Tani waxay ku kala duwan yihiin laga yaabo in ay kiraystaan ​​shirkadda sida ay awooda suuqa iyo ujeedooyinka, laakiin waa celcelis ahaan lagu qiyaasey. Warku waa qeyb weyn niman beerrey ah u shaqeeya laakiin joogta ah la sahan hore burburka boqolkiiba isma badelin.
Halka uu jiro isbedel ah si uu asagu logistics taangiga si ka shaqeeya taangiga, waxaa weli raxan ka mid ah taangiyada si toos ah ay gacanta ku rarta, iyo kuwa kale. Shipper (oo sidoo kale loo yaqaan saarayaasha ama consignors) raxan iyo kuwo kale ay u babac dhigaya si ay u qiimeeyaan sababta oo ah tirada ugu badan ee wax rarta, iyo kuwa kale oo caalamka oo dhan. Waxaa si gaar ah u adag tahay inay isku ururiso liiska weelasha taangiga shipper leedahay, maxaa yeelay, lahaanshaha taangiga waa qayb yar oo ganacsi asaasiga ah iyo - iyadoo ay sabab u - tirooyinka raxan ma yihiin si xor ah laga heli karo. Tani waxay sidoo kale khuseysaa oo kale isticmaala taangiga - sida khadadka maraakiibta, madaxda ciidamada, tareennada, shirkadaha saliidda, warshadaha macdanta iyo Shiinaha qoyska. Qiyaasaha oo ka mid ah
total "dadka kale" waxaa ka mid ahaa in Survey ah.
Sidaas darteed of arrimuhu si uu asagu logistics taangiga waxaa la qiyaasayaa in raxan shipper iyo kuwa kale oo laga leeyahay waa ma guurto ah. Wadayaasha laga yaabaa in ay bixiyaan adeegyada logistics for taangiyada shipper leedahay, laakiin taangiyada kuma jiraan sida taangiyada operator ujeeddo ah sahamintan. Waxaa lagu qiyaasaa in celcelis ahaan ku saabsan 35% ee wadarta raxan shirkadda beenta ah waxaa si toos ah niman beerrey ah u rarta, iyo kuwa kale. In Survey 2013 waxaa lagu qiyaasay in wax rarta, iyo kuwo kale oo laga yaabo leedahay, celcelis ahaan, ku saabsan tiro la mid ah taangiyada in ay yihiin niman beerrey ah ay raxan. Tirada Tani isma badelin in Survey 2016 oo sano ka hor. Users sahanka ka dhigi kartaa hagaajin ku habboon baahiyaha. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan habka loo bixiyo sida sharaxaad socda miisaska iyo tirooyin.
waqti Post: May-28-2018
Badeecadaha iyo adeegyada ganacsiga ee ka dhexeeya Shiinaha ah ...
Riixaya khibrad saliid, produc kiimikada ...
Sida laga soo xigtay s dhaqaale oo caalami ah ...
The raxan weel taangiga caalamka ka kooban ...